Balakoonka Shiinaha ee Balkoolaha Nidaamka Geela Kinzon09 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Ma jiraan wax xirmooyin ah oo u dhexeeya mashiinnada galaaska isla markaana muraayad kasta oo galaas ah waxay si iskeed ah ugu dhici kartaa bidixda ama midigta si ay ugu fududaato hawo ujeedo ama nadaafad leh nidaamka balakoonka barafka ee Kinzon09. Balaayiin dhanbaal ah ama qeyb barxad ah ama furitaan ayaa la gaadhay. Astaamaha nidaamka balkoni balakoonka Kinzon wuxuu ka dhigayaa nadiifinta daaqadaha inay aad u fududaan, waxaad ku nadiifin kartaa gadaal iyo wejiga wejiga muraayadaha kasta. Balakoonka lagu rakibay nidaamka korantada leh ee loo yaqaan 'Kinzon09 balcony system gla glay' wuxuu u eg yahay balakoon xirxiran oo hufan, oo keliya oo aan aheyn ' Waxyeeleeyaan muuqaalka iyo qaabka dhismaha, laakiin sidoo kale wax badan ayey ku biirisaa quruxda iskuxirka leh ee balakoonka.
Nidaamka glacony glazing system-kinzon09
Astaamaha nidaamka nidaamka balkoniinta balkoni ee Finzone09
1. Profile ka xoog badan: Wadada sare waa 3mm dhumucdiisuna muhiimadda dhibicdu waa 5mm dhumuc weyn leh nidaamka balkoni ee balbalaas. Baaxadda muraayadda guud ee galaasku waa 29mm oo sarajooggeeduna yahay 41mm, muhiimadda dhibcuhu waa 2.5mm dhumuc weyn leh nidaamka balkoni ee balzone09.
2. Duuliyayaasha: Nidaamka balkoni ee balkoni leh ee Finzone09 wuxuu adeegsadaa giraangiraha waaweyn oo si tartiib tartiib ah uulasha. Ballaca hal giraangiraha sidday waa 36mm oo sarajooggeeduna waa 11mm.
3. Faashad faneed: Nidaamka balkoni leh ee balkoniiska loo yaqaan 'balzone09 gla glay system' wuxuu u adeegsadaa SS304 silsiladaha dhuumaaleysiga ah si ay culeyska culus u istaagaan.
4. Daboolka badbaadinta: Nidaamka balkoni leh ee balkoni leh wuxuu ku dabaalaa koofiyadda ilaalinta ee loo yaqaan 'nylon' oo ku yaal astaamaha galaaska si looga fogaado in wax yeelo gaadho. Ilaalintu waa sida jaranjarada oo kale, sebashkuna aad ayuu uga fiican yahay.
5. Shaabadal ka wanaagsan: Ma jiro farqi u dhexeeya macluumaadka profile-ka iyo muraayadaha dhalooyinka. Nidaamka dhalaalaya ee loo yaqaan 'balbone09 balcony bal glay system' malahan farqiga u dhexeeya muraayadaha galaaska ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee leh astaamaha dhinacyada.
Galaas kulul ama galaas hawo kulul leh
Ku habboon in la nadiifiyo daaqadda gudaha iyo dibedda
Ma jiro qaab aluminium u dhexeeya muraayadaha
Sheyga Profile: Alaabada aluminium ee 6063T5 ee loo adeegsado astaamaha.
Xarkaha ugufiican: farqiga udhaxeeya profiles track iyo galaas profile. farqi u dhexeeya muraayadaha galaaska ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee leh astaamaha dhinacyada.
Orodyahano Wanaagsan: U adeegso giraangiraha wax sidooda culus oo si tartiib ah u riix. Ballaca hal giraangiraha sidday waa 36mm oo sarajooggeeduna waa 11mm.
Ma jiraan wax rivets ah: Codso koollo gaar ah si aad ugu xirato muuqaalka dhalada iyo muraayadda, ma jiraan wax rivets iyo godad ku jira muuqaalka galaaska.
Qalabka isku xirka: Adeegso SS304 si aad ugu xerdid astaamaha tiirarka si loo hubiyo degenaanshaha isku xirnaanta.
Muraayada: Isticmaal galaas 8mm ah ama 4 + 4 galaas oo dhalaalay.
Hore: Ilaha warshadda Wooden Handrail oo leh Glass - Aluminium Bi laab Albaab JR75 - Kinzon
Xiga: Balakoonka daaqada Kinzon50
Nidaamyada Barafka leh ee Balakoonka
Nidaamka Iftiiminta Balakoonka Nidaamka
Daaqad Fure Tsinka099
Muraayadda Muraayadda Kinzon50
Naqshadda Daaqada Kinzon09
Dariishada Fiilo ee Kala-jeexan Kinzon50